‘ए मेरो हजुर ३’को व्यापारले चलचित्र क्षेत्रमा उत्साह · Aawaj Nepal
‘ए मेरो हजुर ३’को व्यापारले चलचित्र क्षेत्रमा उत्साह
आवाज नेपाल, २०७६ वैशाख ३ मंगलबार
शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को व्यापारले चलचित्र क्षेत्रमा उत्साह मात्र थपेको छैन, चहलपहल पनि बढेको छ । हलमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा लगानी उठ्ने मात्र होइन नाफा पनि राम्रै कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच फेरि निर्मातालाई पलाउन थालेको छ । हुनत, ‘ए मेरो हजुर ३’ले बम्पर कारोबार गर्दै गर्दा अन्य निर्माता मख्ख पर्न भन्दा पनि राम्रो चलचित्र बनाउनतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
यो चलचित्रको व्यापारिक आँकडा सार्वजनिक भएको छैन । तर, चलचित्रको विकेन्ड कलेक्शन मात्र नभई, सोमबार पनि व्यापारको उछाल कमजोर बनेको छैन । यसकारणले पनि चलचित्र लामो रेशको घोडा बन्नेमा चलचित्रकर्मी विश्वस्त छन् ।
चलचित्रका निर्माता सुनिलकुमार थापाले ४ दिने कलेक्शन पूर्ण रुपमा आफूलाई प्राप्त नभएकाले सार्वजनिक नगरेको बताउँदै ४ दिने व्यापारले आफू सुरक्षित हुने बाटोमा लागेको बताए । काठमाण्डौको क्यूएफएक्सले शुक्रबार ११ शोज दिएपनि मंगलबार १४ शोज चलचित्रलाई दिएको छ । यसबाट पनि चलचित्रको व्यापारिक आँकडा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
शुक्रबार नै बम्पर ओपनिङ गरेको चलचित्रको व्यापार शनिबार र आइतबार आक्रामक थियो । बिदाका कारण इनिसियल व्यापार भएपनि सोमबारबाट कम हुने धेरैको अनुमान थियो । तर, सोमबार पनि चलचित्रले आफ्नो व्यापारिक रफ्तारलाई कायम गरेपछि निर्माता खुशी देखिनु स्वभाविक हो ।
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ले इनिसियल व्यापार गर्नुको पछाडि नायक अनमोल केसीको क्रेज, चलचित्रको नामको ब्रान्ड, गीतसंगीत, निर्देशक झरना थापा र ट्रेलरलाई मानिएको छ । ‘कृ र क्याप्टेन’मा प्रयोग गर्न खोज्दा केही हदसम्म चिप्लिएका नायक अनमोल केसी ‘ए मेरो हजुर ३’बाट लभस्टोरी जनरामा फर्किएका छन् । योसँगै फेरि उनलाई हलमा हेर्न दर्शक ओइरिएका छन् । चलचित्रको व्यापारले अनमोल केसी फेरि चम्किएका छन् । अनमोल केसीमाथि लगानी गर्न निर्माताको हानथाप फेरि सुरु हुने पक्का छ । तर, नायक अनमोल केसीले भने करिब ६ महिना कुनै पनि चलचित्र साइन नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’बाट नव–नायिका सुहाना थापा उदाएकी छिन् । चलचित्रले बम्पर कारोबार गरेसँगै सुहाना थापाको करिअर पहिलो चलचित्रबाटै चम्किएको छ । सुहानालाई चलचित्रमा हेरेपछि उनको कामको प्रशंसा गर्नेहरु पनि उस्तै छन् । सुहानाको अभिनयको तारिफ गरेर चलचित्रकर्मीदेखि पत्रकार र दर्शक थाकेका छैनन् । यसैले पनि सुहाना पहिलो चलचित्रबाटै उदाएकी छिन् ।
टिकटक भिडियोका कारण तीन वर्षदेखि हराइरहेका श्रीमान फेला परे
पत्रकारमाथि भरोसा हुनै छाड्यो, आइफा गर्न बजेट नै छुट्याइएको छैनः सञ्चारमन्त्री
आइफामा कस्को खर्च कति ?
बर्दियामा ट्याक्टर चलाएर यसरी गरे मन्त्रीले रोपाईँ (फोटोफिचर)
डा. बाबुराम भट्टराईको ‘किसानी’ हुलिया ! तस्बिरमा हेर्नुहोस्
टिकटक ट्वीन गर्लस् र जीवन रसाईलीको “अमिलो निबुवा” (भिडियो सहित)
आमा र हजुरआमाको हत्यामा जन्मकैद
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक
देशभर मौसममा बदली, पश्चिमका केही भूभागमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना
घूस लिँदै परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई समेत पास गराउँदै
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सपरिवार हात्तीवनमा
चीनले दियो बेलायतलाई कडा चेतावनी
भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षण रोक्न पठाएको यस्तो पत्र